Manakarama ny taha tsara indrindra amin'ny Google Home | Androidsis
Manakarama ny tahan'ny taha tsara indrindra amin'ny tranonao Google
Google Home dia efa any Espana. Ny mpandahateny marani-tsaina an'i Google dia mampanantena fa hanamora ny fiainana ho an'ireo mpampiasa rehetra mihoatra ny findainy amin'ny alàlan'ny fitondrana ny Google Assistant ho ao am-pon'ny tranony. Ity fitaovana vaovao avy amin'ny motera fikarohana ity dia mamela anao hikaroka eo no ho eo ny base data-nao sy manatanteraka baiko toy ny fandrehitra jiro, fametrahana mozika na fanamarinana ny fifamoivoizana.
Araka ny efa nampoizina, mba hankafizana an'ity fandidiana rehetra ity dia ilaina ny manana fifandraisana Internet izay ahafahan'ny fitaovana mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi. Ny mahazatra indrindra ankehitriny dia ny ankamaroan'ny zanaky ny mpifanolo-bodirindrina amintsika dia manana taha internet ao an-trano hampifandray ny fitaovany raikitra: ny solosaina, ny fahitalavitra marani-tsaina, ny thermostat marani-tsaina ... Nefa, fantatrao ve izay karazana rehetra sarany amin'ny Internet inona no azonao karamaina ampiasao ny tranonao Google?
1 Ny fonosana mifangaro, ny mpanjakavavin'ny safidy
2 Mitadiava ny solony amin'ny tamba-jotra wifi 4G
3 Firy ny gigs ilaiko amin'ny app Google Home?
Ny fonosana mifangaro, ny mpanjakavavin'ny safidy
Nandritra ny taona vitsivitsy izao, fonosana niangona Izy ireo no safidy tian'ny Espaniôla. Ireo dia ahafahanao mankafy ny serivisy fifandraisan-davitra rehetra miaraka amin'ny volavolan-dalàna iray ihany sy amin'ny vidiny, amin'ny ankapobeny, mora vidy kokoa noho ny hoe nifanarahana izy ireo. Noho izany, izy ireo no safidy mifaninana indrindra.
Tsy misy isalasalana, finday + tahan'ny internet (misy na tsy misy ny laharana an-tariby) dia safidy azo ampiharina sy mahery hampiasana ny Google Home nefa tsy manahy ny amin'ny hahantona azy. Amin'io lafiny io dia tsy maintsy jerentsika ny:
La hafainganam-pandehan'ny Internet ilainao. Ny marina dia tsy misy fiatraikany amin'ny tambajotra Wi-Fi ao an-tranonao ny asan'ny Google Home, ka mamela anao hanohy hiasa amin'ny fomba mahazatra. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika ireo serivisy rehetra ireo izay hitodika manodidina ny mpandahateny Google. Ohatra, raha hijery atiny avy amin'ny streaming video miaraka amin'i Netflix (ny hany sehatra izay mifanaraka amin'ny Google Home amin'izao fotoana izao) dia ilaina ny manana hafainganam-pandeha ampy hisorohana ny famoahana miadana.
El karazana tambajotra wifi inona no anananao Izany hoe raha manana fifandraisana Wi-Fi azonao atao ny miditra Tambajotra 2.5G na 5G. Ny tena marina dia mifanaraka amin'ny tambajotra roa ny Google Home fa ny 5G Wi-Fi dia mamela fifandraisana mahery vaika sy mahery kokoa. Izany dia satria manana fantsona maro kokoa handefasana sy handraisana data sy signal.
La taham-pahalalana finday inona no ilainao. Miaraka amin'ny serivisy Internet ao an-trano dia ilaina ny mamakafaka anao inona ny tahan'ny finday ilainao ho an'ny finday avo lenta. Ity ampahany ity dia miankina betsaka amin'ny zavatra takinao rehefa tsy any an-trano ianao: habetsahan'ny angona finday, vidin'ny antso sns. Miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana toy ny Mampitaha Internet amin'ny Internet sy ny telephony ho hitanao hoe iza amin'ireo no mifanentana indrindra amin'ny zavatra ilainao ka aza mandany vola be.
Anisan'ireo fonosana mampifandray izay azonao raisina ho an'ny Google Home anao koa ny finday + internet + isa amin'ny fahitalavitra. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny mpandraharaha telefaona sy Internet lehibe dia manolotra tahan'ny fahitalavitra ary na ny serivisy fahitalavitra an-tserasera manokana aza. Movistar +, Orange TV, Vodafone TV ... Misy safidy marobe izay misy koa tolotra atiny fanampiny toy ny HBO, Netflix na Sky.
Ny fahasembanana lehibe amin'ireo taha ireo amin'ny Google Home? Izany, araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny ankamaroan'ireo serivisy tsy manam-paharoa ireo dia tsy mifanaraka amin'izany; Netflix fotsiny. Na izany aza, any Etazonia, serivisy an-tserasera toa ny HBO Go dia vonona hiara-miasa amin'ny Google Home, noho izany Google dia tsy handany fotoana lava hampivelarana ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy espaniola lehibe. Raha ny marina, izao Telefónica dia efa nampiditra an'i Aura ho mpanampy Google Anisan'ireo tolotra hafa, antenaina fa ho mora kokoa ny fomba fampiharana ny sisa amin'ireo vahaolana.
Mitadiava ny solony amin'ny tamba-jotra wifi 4G
ny taha miaraka amin'ny wifi 4G manaova safidy tsy azo iadian-kevitra ho an'ireo maniry hanana wifi hampiasa ny tranonao Google tsy mila fifanarahana fonosana serivisy lehibe. Ireo dia mamela hanana wifi azo entina amin'ny alàlan'ny tsorakazo iray miasa ho toy ny teboka fivoahan'ny signal.
Ny tahan'ny 4G dia safidy mety indrindra raha tsy tonga any amin'ny faritra misy anao ny fandrakofana fibre. Amin'ny ankapobeny, ireo taha ireo dia manome hafainganam-pandeha haingana kokoa noho ny taha ADSL nentim-paharazana, izay mialoha mialoha hanatsarana kalitao. Ho fanampin'izay, matetika tsy manana faharetana izy ireo ary mamela anao hitondra ny wifi any amin'izay ilana azy satria miasa miaraka amin'ny karatra SIM.
Ny fiasan'ny Google Home miaraka amin'ny tahan'ny wifi 4G dia mitovy tanteraka amin'ny serivisy Internet mahazatra. Amin'ny maha-mpampiasa anao dia tsy ho hitanao ny fahasamihafana. Mazava ho azy, tsarovy fa ny serivisy azo entina dia ny Wi-Fi fa tsy ny tranonao Google. Ity dia tsy maintsy avelanao apetraka amin'ny toerana iray toy ny mahazatra foana. Rehefa mila mitondra Internet miaraka aminao ianao dia mila esorinao fotsiny ilay fitaovana ary dia izay.
Firy ny gigs ilaiko amin'ny app Google Home?
Google tsy manjaitra raha tsy misy kofehy. Noho izany ho an'ny amboary ny Home Home ary ankafizo izany, ilaina ny misintona ny fampiharana mifanaraka amin'ny findainao.
La Fampiharana Google Home Io ihany no ahafahanao mampifandray ny findainao amin'ny Chromecast handefasana horonan-tsary sy atiny ao amin'ny fahitalavitrao. Ny fampiasana azy dia tsy midika hoe misy enta-mavesatra amin'ny fonosanao angona, noho izany tsy atahorana ho lany megabytes ianao amin'ny fampiasana azy.
Ny tokony hoheverinao amin'ity tranga ity dia ny fitehirizana sy ny fizakan-tena an'ny telefaona findainao. Raha raisina ho ilaina ny fampiharana dia tsy maintsy ilaina fotsiny ny manamboatra ny fitaovanao voalohany ary mandefa baiko na atiny, andramo avoaka io na dia any aoriana aza rehefa tsy ampiasainao mba tsy hanohizany ny fandaniana na hibodo habaka raha lavitra ny trano ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Manakarama ny tahan'ny taha tsara indrindra amin'ny tranonao Google
Mandrosoa mialoha amin'ny 11.11 miaraka amin'ny tolotra tsara indrindra amin'ny eBay